के जर्मनी पेनाल्टीमा साँच्चै बलियो छ?
घरेलु मैदानको फाइदा कति हुन्छ? अनि विश्वकपमा मेक्सिकोका कुन रक्षापङ्क्तिका खेलाडी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेका गोलको सङ्ख्या बराबर छ?
विश्वकप विजेताको सूचीमा ब्राजिल शीर्ष स्थानमा छ।
उसले पाँच चोटि विश्वकप जितेको छ। अन्तिम पटक उसले सन् २००२ मा विश्वकप जितेको थियो। सन् २०१४ मा ब्राजिलले विश्वकप आयोजना गरेको थियो।
तर सेमीफाइनलमा ७-१ गोलको ठूलो अन्तरले हार बेहोर्‍यो।
युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी देशबाहेक अरूले अहिलेसम्म विश्वकप जितेका छैनन्।
जर्मनी, स्पेन र इटलीले पछिल्ला तीन प्रतियोगिता जितेपछि युरोपेली देशको पोल्टामा विश्वकप ११ चोटि र दक्षिण अमेरिकाको पोल्टामा जम्मा नौ चोटि पुगेको छ।
जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोज सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्।
उनले विश्वकपमा १६ गोल गरेका छन्। सन् २०१६ मा खेलबाट सन्यास लिएको भए पनि उनी यसपालि जर्मनीको टोलीमा कर्मचारीको भूमिका लिएर रुस जाँदैछन्।
कुल १५ गोल गरेका ब्राजिलका रोनाल्डो दोस्रो स्थानमा छन्।
उनले ब्राजिलले विश्वकप जितेको सन् २००२ का खेलहरूमा आठ गोल हानेका थिए।
एउटै प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोल गरेको कीर्तिमान भने फ्रान्सका जुस्ट फोँतेनले राखेका छन्।
उनले सन् १९५८ को विश्वकपका ६ खेलमा १३ गोल गरेका हुन्।
गत विश्वकपमा कोलम्बियाका अग्रपङ्क्तिका खेलाडी हामेस रोद्रिगेसले गोल्डन बूट जितेका थिए।
यसपालि पनि उस्तै प्रदर्शन गर्नसके सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा उनले आफूलाई प्रमाणित गर्नेछन्।
गोलकर्ताको सूचीमा भएका एक मात्र डिफेन्डर मेक्सिकोका राफाएल मार्केस हुन्।
यी ३९ वर्षीय खेलाडी पाँचौँ पटक विश्वकपमा सहभागी हुँदैछन्। उनले र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले तीन, तीन गोल गरेका छन्।
रेन्जबाट प्रहार गरिएका बलको सङ्ख्या घट्दो देखिन्छ।
एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ गत विश्वकपको फाइनल खेल र ओप्टाले आँकडा राखेको सन् १९६६ को खेल जसमा इङ्ग्ल्यान्ड विजयी भएको थियो।
सन् १९६६ मा बक्सबाट भन्दा बाहिरबाट दोब्बर संख्यामा पोस्टमा बल प्रहार गरिएको थिए।
तर सन् २०१४ को फाइनल खेलमा गरिएका २० प्रहारमध्ये अधिकांश पेनाल्टी एरियाभित्रबाट भए।
सन् १९६६ मा विश्वकप जितेपश्चात् इङ्ग्ल्यान्ड केवल एक पटक क्वार्टर फाइनलभन्दा माथि पुग्न सकेको छ।
तर विभिन्न देशका राष्ट्रिय टोलीहरू इङ्ग्लिश प्रेमियर लिगमा खेल्ने खेलाडीहरूले नै भरिएका छन्।
इङ्ग्ल्यान्डका उच्च तीन लिगका विभिन्न क्लबमा अनुबन्धित १३० जना खेलाडीहरू विश्वकपमा छानिएका विभिन्न टोलीमा परेका छन्। जबकी स्पेनी क्लबका ८१ र जर्मन क्लबका ६७ खेलाडी त्यसरी खेल्दैछन्।
उरुग्वे, पनामा, सउदी अरब र रुस मात्र ती देश हुन् जसको टोलीमा इङ्ग्ल्यान्डका कुनै क्लबबाट खेल्ने खेलाडी परेका छैनन्।
इङ्ग्ल्यान्डको टोलीका सबै २३ जना खेलाडी उही लिगमा खेल्छन्।
अर्कोतिर स्वीडन र सेनेगलका टोलीमा भने ती देशका घरेलु लिगमा खेल्ने एउटा पनि खेलाडी परेका छैनन्।
विश्वकपमा आजसम्म एक जर्मन खेलाडीले मात्रै पेनाल्टी खेर फालेका छन्।
तर जर्मन टोलीले पेनाल्टी प्रहारको अवसर पाएका चारवटै खेल जितेको छ।
सन् १९८२ देखि उसले पेनाल्टी प्रहारबाट १५ गोल गरेको छ।
पेनाल्टी प्रहारमा पराजय भोगेर इटली तीन चोटि विश्वकपबाट बाहिरिएको छ। सन् १९९४ मा ब्राजिलविरुद्धको फाइनलमा त्यति बेलाका चर्चित खेलाडी रोबर्टो बाजियोले पेनाल्टी प्रहार गर्दा बल गोलपोस्टमाथिबाट अकासिएको थियो।
तर सन् २००६ मा फ्रान्सलाई पेनाल्टी प्रहारबाटै हराएर विश्वकप जित्दा इटलीले पेनाल्टीप्रतिको आफ्नो तितो अनुभव केही साम्य पारेको हुनुपर्छ।
प्रकाशित : आइतबार, जेठ २७, २०७५०८:१४